आज ५ सय ८० वर्ष यताकै सबैभन्दा लामो ग्रहण लाग्दै, ग्रहणमा के गर्ने के नगर्ने ? || धर्म संस्कृति
आज ५ सय ८० वर्ष यताकै सबैभन्दा लामो ग्रहण लाग्दै, ग्रहणमा के गर्ने के नगर्ने ?
काठमाडौं। आज मंसिर ३ गते सन् २०२१ को अन्तिम चन्द्र ग्रहण लाग्दै छ । पछिल्लो ५ सय ८० वर्षमा पहिलो पटक सबैभन्दा लामो अवधिसम्म आज चन्द्र ग्रहण लाग्नेछ । यो चन्द्र ग्रहण ३ घण्टा २८ मिनेट २४ सेकेन्ड लामो हुनेछ ।
यो पटकको चन्द्र ग्रहणमा चन्द्रमाको ९७ प्रतिशत भाग ढाकिनेछ । दिउँसो करिब साढे १ बजे यो ग्रहण उच्च बिन्दुमा पुग्नेछ । यो ५ सय ८० वर्ष यताकै सबैभन्दा लामो अवधिको चन्द्र ग्रहण हुनेछ ।
हजारौँ वर्षदेखि किन जीवित छ योग ?
गुरु नानकको ५५३औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
महागुरु फाल्गुनन्द जयन्ती आजः विश्वयुद्धकाे लडाइँदेखि समाज सुधारकसम्म
किन आफूखुसी रुद्राक्षको माला लगाउनु हुँदैन?